OPDO, "Haaromtu haaromi!"jedha Uummatni Kichuu
HomeAfaan OromooOPDO, “Haaromtu haaromi!”jedha Uummatni
#OPDO, “Haaromtu haaromi!”jedha Uummatni
“OPDO Godinaalee hojii isaani duritti deebite. Ceephoo fi ceephama jette dhiphistoota,Gosumma jechuu jalqabde hojjattota rakkisaa jirti.Of sirressu qaban erga haaromsa taate.”
#OPDO fi Qeerroo III: Ijoollee walirratti hin kakaasinaa!!!
“OPDOn ijoollee jidduutti waldhabbii kaasuuf deemaa jirti. Akka Godina Shawaa Lixaatti waanti Maqaa Leenjii Qeerroo jedhamuun deemaa jiru waan fokkisaadha. Dhaabachuu akka qabu dhaamna. Booddee balaa Uumamuuf kan Itti gaafatamu OPDO mataasheeti. Kanin kana kennuuf immoo akka Dambii Qabsoo Oromoo hardha geessifame keessatti
1. Qeerroon Itti gaafatamaa hin qabu
2. Qeerroon dhaaba Paartii kamuu keessatti hin hirmaatu yoo OPDOn balleessite Ni balaaleffata, KFOs , ABOs yoo jabaatanii hojjetanis ni faarsa
3. Qeerroon faayidaa dhuunfaaf Lafaa fi qarshii yookiin aangoo barbaachaaf hin qabsoofne
“Qeerroo OPDO leenjisaa jirtu bakka nu akka hin buune beekamuu qaba. Qeerroo isaan jedhanis warra akka fedhan waanta jedhame tole jettuuf leenjifachaa jirti. Qabsoo Hattee abbaa qabsoo of gochaa jirti. Dhaabachuu qaba.”